Zing Play Apk - Download APK from Apkask Android Apps & Games
Home » Board » ZingPlay - Games Portal - Pool - Poker-ိုနိုပိုလီ
ZingPlay - Games Portal - Pool - Poker-ိုနိုပိုလီ APK
Downloads: 86 Updated: June 05, 2018 Category : Board
by:ZingPlay Games Requires: Android 4.0 and upPrice:Free
ZingPlay - Games Portal - Pool - Poker-ိုနိုပိုလီ Description
လီးပဲ Here we provide ZingPlay – Games Portal – Pool – Poker-ိုနိုပိုလီ V 1.2.2 for Android 4.0++ Zingplay ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်၊ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဂိမ်းများစွာတည်ရှိတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဂိမ်းကစားသူ အားလုံးအတွက် လက်မလွတ်သင့်တဲ့ နေရာတခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ 3F လို့ခေါ်တဲ့ (Fun – အပန်းပြေ, Friendly- မိတ်ဆွေတိုး ၊ Free – လုံးဝအခမဲ့) ဖြစ်ရုံသာမက ဂိမ်းအများကြီးကို install လုပ်စရာမလို ၊ ကိုယ်ကစားချင်တဲ့ ဂိမ်းကိုပဲ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး ကစားနိုင်ပြီး ဂိမ်မာတွေအတွက် အဆင်ပြေစေဖုို့ Zingplay Games Portal ကို မိုဘိုင်းဗားရှင်းအနေနဲ့လည်း ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။
Zingplay Games Portal မှာ ဂိမ်မာတွေအတွက် ရေပန်းစားလူကြိုက်များတဲ့ ဂိမ်းတွေဖြစ်တဲ့ ၊ စစ်ဆင်ရေးဂိမ်းများ၊ “ဘိလိယက်” အားကစားဂိမ်း၊ “Poker မြန်မာ" ၊ "ဖဲသုံးချပ်" ဖဲဂိမ်းများအပြင် ဗျူဟာသုံးပြီး ဆော့ကစားရတဲ့ “မိုနိုပိုလီ” စတဲ့ ဂိမ်းများစွာ ပါရှိပါတယ်။
Chaos Age Zingplay နည်းဗျူဟာသုံး မိုဘိုင်းဂိမ်းဟာ ဗီယက်နမ် Android အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာတော့ အကောင်းဆုံးလို့သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ လွယ်ကူစွာ ကစားလို့ရတဲ့ ဂိမ်းဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာစကားတွေနဲ့ နာမည်ကျော်ကြားပြီး ကစားသမားတိုင်း ကိုယ့်အမိမြေမှာ ဘုရင်တစ်ဆူဖြစ်ကြောင်းပြသနိုင်ရုံသာမက ၊ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ clan တွေမှာလဲ ပါဝင်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
Poker မြန်မာ ZingPlay နဲ့ ဖဲသုံးချပ် ZingPlay ဖဲဂိမ်းတွေဟာ ရွှေမြန်မာတို့အတွက် အထူးပြုလုပ်ပေးထားပြီး Zingplay Games Portal ကိုလည်း မရှိမဖြစ် app တစ်ခုအဖြစ် ဖြစ်လာစေမှာပါ။ ကစားသူတွေအနေနဲ့ အနိုင်ရဖို့အတွက် မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတော့ ချဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ရှိတာတွေကို တခါတည်းအကုန် မကစားမိစေနဲ့ဦးနော်!
Download ZingPlay - Games Portal - Pool - Poker-ိုနိုပိုလီ APK File
Download ZingPlay - Games Portal - Pool - Poker-ိုနိုပိုလီ
File Name: ZingPlay - Games Portal - Pool - Poker-ိုနိုပိုလီ.apk
Old Versions ZingPlay - Games Portal - Pool - Poker-ိုနိုပိုလီ
ZingPlay - Games Portal - Pool - Poker-ိုနိုပိုလီ 1.2.2 Apk File [Free] Date: 2017-12-23
What's New in ZingPlay - Games Portal - Pool - Poker-ိုနိုပိုလီ
DISCLAIMER: ZingPlay - Games Portal - Pool - Poker-ိုနိုပိုလီ is the property and trademark from , all rights reserved by Click on the above link to proceed to the apk file download page or app buy page.
Related ZingPlay - Games Portal - Pool - Poker-ိုနိုပိုလီ
Comments ZingPlay - Games Portal - Pool - Poker-ိုနိုပိုလီ